Salaan! Kani waa bogga xiriirka BU, halkaas oo aad ka heli karto dhammaan macluumaadka xiriirka oo bixiya habab badan oo lagu tago BU! Hoos, waa foom aad buuxin karto haddii aad jeclaan lahayd inaad noo soo dirto farriin ku saabsan adeegyadeena. Haddii aad ubaahantahay naqshad qaabeysan, waad buuxin kartaa foomka tilmaamaya waxa saxda ah ee aad ubaahantahay iyo / ama aad rabto. Halkaas, waxay tixgelin doontaa dalabkaaga oo waxay bilaabi doontaa ka shaqeynta mashruucaaga si loo gaaro dhameystir guul leh. Intaas ka dib, BU waxay si joogto ah ula xiriiri doontaa waad kula socodsiin kartaa xaaladda mashruucaaga si loo hubiyo inay buuxisay shuruudahaaga. Marka mashruucu dhammaado oo uu diyaar u yahay in la idiin qaybiyo, qiimaynta / qaansheegta ayaa laga wada hadli doonaa, ka dib waxaan ku sii wadi karnaa bixinta.
Waxaad sidoo kale awood u leedahay inaad u isticmaasho foomkaan si aad uga faa'iideysato, haddii aad hayso wax su'aalo ah, walaac ah, weydiinno, soo jeedinno ah, ama haddii aad jeclaan lahayd inaad u dirto BU farriin guud! Macno malahan ujeedada fariin kasta, waxaa looga jawaabi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan danaynaynaa oo aan qadarinaynaa macaamiisheenna, iyo hal shay oo aan qabanno si aan u muujino tixgelinta aan kuu qabno waa inaan kula soo xiriirno <3
Dhawaan, waxaan helay wicitaan wicitaan ah oo ka imanaya qof iska dhigaya inuu garanayo cidda aan ahay sidii inaan la kulanay, oo magacayga si sax ah u sheegay oo iska dhigay qof ka mid ah ururrada qaarkood. Qofkaan ayaa laga soo wacay Barrie, wuxuu ii sheegay inuu u shaqeynayay hay'ad la yiraahdo Fightback Toronto wuxuuna yiri wuxuu ii soo diri doonaa xiriiriye si uu iigu casuumo dhacdo ka dhaceysa Montreal. Saddexdaan meelood si cad wax iskuguma darin. Markii aan ku soo noqday dugsiga sare, waxaan aaday tamashleyn qaar ka mid ah laakiin dhammaantood ma wada ahayn, waxaanan xusuustaa ka mid noqoshada emailka 'Fightback Toronto', laakiin ninkani wuxuu igu yidhi waxaan kula kulmay dugsigeygii sare oo aanan sameyn, iyo xaqiiqda ah inuu ku guuleystay inuu wax badan helo macluumaadkeyga shaqsiyadeed marka laga reebo emaylkeyga waa cabsi badan. Ka dib waxaan u dhaqaaqay inaan xannibo maxaa yeelay ma doonayo wicitaan kale oo sidan oo kale ah. Haddii aad hesho lambar ka bilaabmaya 1 (705) oo aadan garanayn cidda ay taasi noqon karto, ha ka jawaabin. Hadday farriin ka tegayaan, u hayso caddayn ahaan iyo caddayn ahaan in wicitaankan la sameeyey haddii aad go'aansato inaad qaaddo tallaabo kasta oo dheeraad ah, haddii kale, tirtir oo xannib lambarka. Waxaan taageeray ururkan in mudo ah, laakiin hada waxaan go aansaday inaan horay usii socdo oo waan xannibay emaylka sidoo kale maxaa yeelay waxay hada isku dayayaan inay adeegsadaan macluumaadkaaga yar si ay u ururiyaan kuwa kale si ay ugu sameeyaan wicitaano khiyaano ah.
Instagram: @ ganacsade._